Moments Neshamwari 14
Pane chero munhu anoziva kwairi nzvimbo yakatenderedza uko zuva redu nemapuraneti akaratidzika kunge ari kutenderera? Ndakaverenga kuti inogona kunge iri Alcyone kana Sirius.
Vazivi venyeredzi havasati vambosarudza kuti ndeipi nyeredzi iyo iri musimboti wepasirese mune toto. Imwe yega yeye nyeredzi dzinofungidzirwa kuti ndiyo musimboti uye pane yakazoonekwa kuti dzave kufamba. Chero bedzi vazivi venyeredzi vakangobata neparutivi rwekuongorora nyeredzi, havagone kuwana pakati. Icho chokwadi ndechekuti, hapana imwe yeaya nyeredzi anoonekwa ari pakati pezvakasikwa. Nzvimbo yepakati pezvisikwa haioneke uye kuti isawanikwe neteleskopu. Izvo zvinoonekwa zvakasikwa asi chikamu chidiki chechisiko chaicho, mupfungwa imwe chete iyoyo icho chinoonekwa chemunhu, muviri wake wenyama, chikamu chidiki chemurume chaiye. Muviri wenyama, kungave wemunhu kana wepasirese, une musimboti wechibatiso unobata zvidimbu zvinooneka zvemuviri pamwechete. Kuburikidza neiyi nhungamiro yokuumba inoshanda imwe nheyo, nheyo yehupenyu. Musimboti wehupenyu unodarika kupfuura wemuviri uye wekuumba nheyo uye unochengeta iwo ese masumbu emuviri wemuviri uye miviri yese iri munzvimbo mukufamba. Nheyo yehupenyu pachayo inosanganisirwa musimboti yakakura iyo, kune pfungwa yemunhu, haina musana sepane nzvimbo. Iyi nheyo inobatwa nevanyori vezvitendero uye magwaro saMwari. Iyo iyo Universal Mind, iyo inosanganisira zvinhu zvese mukuratidzwa, zvinooneka kana zvisingaoneki. Ihwo huchenjeri uye hune masimba-ese, asi haina zvikamu mupfungwa yakafanana kuti nzvimbo haina zvikamu. Mukati mayo zvakasikwa zvinooneka zvese uye zvinhu zvese zvinorarama uye zvinofamba uye zvine izvo zviripo. Iyi ndiyo nzvimbo yepakati pezvose zvakasikwa. "Chikamu chiri kwese kwese uye kutenderera kwese uko."
Chii chinoita kuti mwoyo womunhu urove; Ndiyo here kudengenyeka kwemafungu kubva kuzuva, uyewo nezvekufema?
Vibrations kubva kuzuva haikonzerese moyo kurova, kunyangwe zuva rine chekuita nekutenderera kweropa uye nehupenyu hwese hwepanyika. Chimwe chezvinokonzeresa kurohwa kwemoyo chiito chemweya wekufema paropa sekusangana kwazvakaita mu pulmonary alveoli, mweya-makamuri emapapu. Ichi chiitiko chekufema kwemweya paropa renyama, nzvimbo yepakati payo ndiyo mwoyo. Asi chiitiko chekufema kwemweya hachisi icho chaicho chinokonzera kurohwa kwemoyo. Chikonzero chikuru ndiko kuvapo kwemuviri wechipfungwa chinopinda mumuviri pakuzvara uye chinoramba chiri mukati mehupenyu hwomuviri. Ichi chinongedzo chepfungwa chakanangana nechimwe chisiri mumuviri, asi chinogara mumhepo yemuviri, chakatenderedza uye chiitwa pane chemuviri. Nekuita uye kudyidzana kwezvinhu izvi zviviri, iyo yekubuda nekufema inoenderera kuburikidza nehupenyu. Chikamu chepfungwa chiri mumuviri chinogara muropa uye zvakananga kuburikidza neichi chipfungwa chinogara muropa icho mwoyo unokonzerwa kurova.
"Mwoyo wemumwe" inyaya hombe; "Kufema" inyaya yakakura; zvakawanda zvinogona kuve zvakanyorwa pamusoro pavo. Kuti isu tikwanise kupindura chikamu chekupedzisira chemubvunzo: "zvakare nezve nekufema" isu tinofanirwa kuziviswa "chii nazvo."
Ndeipi ukama pakati pemwoyo uye zvepabonde zvinoshanda-zvakare kufema?
Mwoyo wemunhu unogona kunyatsotaurwa kuti unowedzera kuburikidza nemuviri wese. Kwese kupi ir ir artery, veins kana capillaries, pane iripo yemoyo. Iyo inotenderera inotenderera inongori chikamu chezviitiko cheropa. Ropa ndiyo iri pakati pekufema kwekutaurirana pakati penhengo nemuviri. Ropa, saka, mutumwa pakati pemweya wekufema uye nhengo dzebonde. Isu tinofema mukati memapapu, mapapu anoendesa mweya kune ropa, kuita kweropa kunomutsa nhengo dzebonde. Mu runyorwa paThe Zodiac, V., iro rakaonekwa mu "Izwi," Vol. 3, mapeji. 264-265, munyori anotaura nezve gland yeLuschka, iyo chaiyo nhengo yechiishu, sekuchiva kwepabonde. Ikoko zvinotaurwa kuti nekuputika kwega kwese iropa rinokurudzirwa uye kuita pane gland yeLuschka uye kuti nhengo iyi inogona kubvumira simba riri kutamba mukati mayo kuenda pasi kana kumusoro. Kana ichidzika zasi, inobudira kunze, ichiita pamwe neiyo nhengo yakatarisana, iri virgo, asi kana ichikwira kumusoro inoitwa kuti iite nokudaro kufema uye nzira yayo iri munzira yemuzongoza. Mwoyo ndiyo nzvimbo yepakati yeropa, uye zvakare horo yekugamuchira apo mifungo yose inopinda mumuviri inowana vateereri nepfungwa. Pfungwa dzechimiro chebonde dzinopinda mumuviri kuburikidza nemitezo yebonde; vanomuka vonyorera nzira yekupinda mumoyo. Kana iyo pfungwa ikavapa vateereri mumoyo uye ichivaraidza kutenderera kweropa inowedzerwa uye iro ropa rinoendeswa kune zvikamu zvinoenderana nepfungwa. Kutenderera kwakawedzera kunoda kufema nekukurumidza kuti ropa rigone kunatswa ne mweya wekupumha mumapapu. Zvinoda masekondi makumi matatu kuti ropa ripfuure kubva pamoyo kuburikidza nemitsipa kusvika kumagumo emuviri uye nekudzokera kumoyo kuburikidza nemapfupa, kuita denderedzwa rimwe chete. Mwoyo unofanirwa kufema nekukurumidza uye kufema kupfupi kana pfungwa dzebonde dzikavarairwa uye nhengo dzebonde dzakasimudzirwa neropa kubva pamoyo.
Zvizhinji zvezvirwere zvegomarara uye kunyunyuta kwetsinga zvinokonzerwa nekushandiswa zvisina basa kwesimba rehupenyu kuburikidza nemifungo yebonde; kana, kana pasina chishandiso, nekudzokororwa kwese kwese nhengo yemuviri yesimba rehupenyu ichidzoka kubva kuzvikamu zviri mubvunzo uye nekudzoka mukutenderera kweropa kubva kunhengo dzebonde. Simba rinoburitswa rinodiridzwa uye rinourayiwa nerech. Masero akafa anopinda muropa rinoaparadzira nemuviri. Ivo vanosvibisa ropa nechirwere nhengo dzomuviri.kufamba kwemweya chiratidzo chemamiriro epfungwa uye kunyoreswa kwemanzwiro emoyo.
Ko mwedzi unorevei kune munhu uye humwe hupenyu pasi pano?
Mwedzi une zvinokwezva zvemagineti yepasi uye zvese zvinoyerera zvepasi. Iko kukura kwekukwezva kunoenderana nechikamu che mwedzi, chinzvimbo chayo chakatarisana nepasi, uye mwaka wegore. Kukwezva kwaro kwakasimba pane iyo equator uye isina kusimba pamatanda. Simba rekushongedza kwemwedzi rinodzora kusimuka nekudonha kwemafuta mune zvese zvinomera uye rinosimbisa kusimba uye kugona kwezvinhu zvekurapa muzvirimwa zvakawanda.
Mwedzi unobata iyo yemuviri astral zvido mumhuka nemunhu, uye pfungwa mune varume. Mwedzi une yakanaka uye yakaipa chikamu mune hukama hwayo nemunhu. Kazhinji kutaura rumwe rutivi rwakaipa rwunoratidzwa nezvikamu zvemwedzi mukati menguva yayo yekupera; rutivi rwakanaka rwakabatana nemwedzi kubva panguva yekutsva kusvika kumwedzi uzere. Ichi chishandiso chakawanda chinoshandurwa nematare emunhu; nekuti zvinoenderana nehukama hwemunhu muhurongwa hwake hwepanyama uye hwemuviri, kusvika pamwero wekuti mwedzi ungamufurira. Zvese zvinopesvedzera, zvisinei, zvinogona kuve zvinopesana nekuda, kufunga, uye kufunga.
Zuva kana mwedzi zvinotonga kana kutonga nguva yekudzivirira here? Kana zvisina kudaro, chii?
Zuva harisi kuronga nguva; inyaya yeruzivo rwakawanda kuti nguva yekuenda kumwedzi inoenderana nedzimwe nhanho dzemwedzi. Mukadzi mumwe nemumwe ane hukama hwakasiyana nemwedzi mukuita kwake kwepanyama uye kwepfungwa; sekukanganiswa kwemwedzi kunokonzeresa kuenderera kwemvura zvinotevera kuti chikamu chimwe chete chemwedzi hachiunzi nguva mune vakadzi vese.
Mwedzi unokonzeresa hutachiona hwekubereka uye hwosiya ovary. Mwedzi une maitiro akafanana pamurume. Mwedzi unopesvedzera kubata uye unoita kuti zvisakwanisika munguva dzakati, uye inosarudza nguva yekusimbisa muviri uye nguva yekuzvarwa. Mwedzi ndicho chinhu chikuru mukugadzirisa nguva idzi, uye mwedzi zvakare chinhu chakakosha mukukura kwe "fetus", nekuti muviri wemuamai newa fetus ndeumwe neumwe wakanangana nemwedzi. Zuva zvakare rine chirevo pamabasa ezera; simba rayo rakasiyana nereye mwedzi, mune izvo asi iyo mwedzi unopa iro remagineti yemhando uye pesvedzero kumuviri we astral uye mvura, zuva rine chekuita nemagetsi kana hupenyu hupenyu hunhu, uye hunhu, chimiro uye kupisa kwemuviri. Zuva uye mwedzi zvinopesvedzera murume pamwe nemukadzi. Simba rezuva rine simba pamurume, iye mwedzi mune mukadzi.